MYU SHADAN: Hacking ကို အခြေခံသဘောလောက် ကလိချင်သူများအတွက် - Relytec All In One Keylogger v3.8 + Patch / Keygen
Hacking ကို အခြေခံသဘောလောက် ကလိချင်သူများအတွက် - Relytec All In One Keylogger v3.8 + Patch / Keygen
Facebook ကနေ အားမနာပါးမနာနဲ့ တွေ့တိုင်းတောင်းနေတဲ့ အကိုတစ်ယောက်အတွက် Keylogger တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Kelogger တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိလိုချင်တဲ့ Data တွေကို လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Security ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရှင်များထံမှ Data တွေကို ရယူနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Feature အပြည့်အစုံသုံးနိုင်ဖို့အတွက် Patch နဲ့ Keygen ကိုပါထည့်ပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေတာနဲ့သာအသုံးပြုကြပါဗျာ။ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ရင် သူများထက်ခြေတစ် လှမ်းနောက်မကျစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အခုပေးလိုက်တဲ့ Relytec All In One Keylogger ဟာ သူတပါး အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသေး စိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
This is Invisible Keylogger surveillance software , Keystrokes Recorder, Spy Software tool that registers every activity on your PC to encrypted logs. The Keylogger Software allows you to secretly track all activities from all computer users and automatically receive logs toadesire e-mail/FTP/LAN accounting.
Posted by myu shadan at 10:09 PM